5 Best European Capitals ukuba ahambe ngetreyini | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Best European Capitals ukuba ahambe ngetreyini
Ixesha ekugcineni sesifikile – nokuba wena nje izidanga eyunivesithi, amabombo ngenxa iholide yakho yonyaka, okanye baye bagqiba ukuba womba zehambo Ilizwe ke awukho, ngalunye olukhethileyo ukuba uhambo eYurophu ngololiwe. Ngumbono yothando, olude uhambo yi amawaka kuyo yonke le minyaka. Kwakhona ukuba hlamarisaka ngokupheleleyo. Europe yaziwa ngokuba zendibaniso Umzila elihle. Ukususela amatikiti aphansi ukuya yokupasa kwilizwekazi-eqala kaloliwe EU, kulula yokuba itshakace kwi overnighter kwaye sifike oya kuyo ekuseni elandelayo, ilungele adventure yakho entsha.
Kodwa ukuba uye phi? Nokuba lixesha yakho okokuqala okanye yeshumi yakho, kwawethu umthamo koololiwe olukhoyo kunokubangela uxinezeleko, ukudideka, kunye noloyiko olupheleleyo lokulahleka. Ungakhathazeki ukuba – kuba siqokelele apha uluhlu lwamabhakethi lwe 5 best neengqukuva aseYurophu uhambo ngololiwe. Hlala phantsi, bophelela phezulu, kwaye ngaphandle igumbi baguettes zintle yaseFransi, kuba mhlawumbi uza kuba no- ukhwele.
1. Best European Capitals ukuba ahambe ngetreyini: Paris, Fransi
njengoko wathembisa, siza kuqalwa kulo hambo olucacileyo, nge stop kwesinye ezininzi izixeko adumileyo kunye akhe adumileyo naye emhlabeni. IParis iye ezinye zoololiwe uxhulumaniso best emhlabeni, kunye koololiwe ezisebenza kuwo kumbindi wesixeko, ngoko utshintsho kude kwisikhululo. IParis izele izinto ukwenza, ngoko uya ufuna ukuhlala apha iintsuku ezintathu ubuncinane ukufumana amagqabantshintshi lobomi basedolophini.
Misa i Louvre ngokuba enifunda kwi-Mona Lisa okanye basebenzise ezo glutes ngokuthi ekuzameni Arc De Triomphe. Yonwabela cruise isidlo kwi Rhein, siyokundwendwela kwezinye boutiques French, and take in the gleaming Eiffel Tower as it comes to life in the evenings.
Kanjalo, IParis ngaphezu embindini walo mzi. Esi sixeko ifike ilikhaya kubantu abangaphezu kwezigidi ezibini, nto leyo ethetha ukuba uchithe iiveki apha ngaphandle ukuzikrwempa ngokwenyaniso phezu oko kumele anikele. Gateway uhambo namhla ingxokolo kwi-Pont Alexandre III kunye nentloko ku Versailles, apho Royal Palace nangoku uyabusa tlakukeke nangona zezithuba wayo ukususela yee-1700. amatikiti Usuku nje € 20 yaye ziquka ungeno kwi Palace, imiyezo, kwakunye nokunye okuninzi. Kanangcono, oololiwe izakusebenza kumbindi wesixeko ngqo ukuya Palace, leyo eyenza ukufumana kukho impepho. Le interconnectedness kwenza ngokusemthethweni Paris enye izihloko yethu yaseYurophu uhambo ngololiwe.
Enye siqu wam imizi ozithandayo kunye nje iiyure ezimbini eParis kukho ikomkhulu United Kingdom: London. Le kwembiza ephuphumayo yokunyibilikisa yeenkcubeko ilikhaya ephezulu abantu kwezigidi ezilithoba kwiinkalo zonke zobomi. Ukusuka Posh Chelsea ukuba ngomoya ABU, uya kufumana imisebenzi yomntu wonke kwiqela lakho. Catch omnye nomculo zakutshanje ngaphambi kokuba phezu Globe Shakespeare kwaye agqibezele ubusuku lakho ungayekwa, inqaba zonke e London.
Uya afune mandikhawulezise kwesi sixeko, ceba ixesha lakho ngokufanelekileyo. Enoba ukuba babesingise Harry uMbumbi studio (seyure ukusuka kumbindi wesixeko), okanye ukuthatha nje neendawo eziphambili ezifana Tower of London, st. UPawulos Cathedral, Westminster Abbey, Big Ben, okanye i London Eye, zonke umzuzu wachitha eLondon lithuba lokufunda ngakumbi malunga lizwe Empire xa owathatha ihlabathi.
Uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu kwi-Eurostar ususa eParis usiya kwiziko laseLondon ngaphezulu nje kweeyure ezimbini, nto leyo ethetha ukuba uya kuchitha ngaphantsi ixesha ohambahambayo ngaphezulu ixesha adventuring. Ngaloo ndlela, Sithatha iLondon njengenye yezona zihloko zibalaseleyo zaseYurophu zokuhamba ngololiwe.
3. Best European Capitals ukuba ahambe ngetreyini: Amsterdam, elamaDatshi
Famous for imisele yayo nabemi ibhayisikile-oxhomekeke, Amsterdam Usibonis ezinkulu Netherland kaThixo. Ne design unique, Amsterdam kuba sisixeko mpela umtsalane kunye standout phakathi kweentsika European. Oololiwe eParis kuthatha iiyure ezintathu ayise nani e Amsterdam Centraal, isembindini kweso sixeko.
Head kwi Museumplein ukuba kwi Van Gogh imyuziyam ngaphambi kokuba kwiNdlu of Bols Cocktail & Genever Experience, ebandakanya ukhetho lwakho cocktail egumbini layo nokungcamlwa.
Musa ukulibala babheke i misele, mhlawumbi. Nokuba uthatha uhambo elizimiseleyo okanye ngcileza elinye lwezikhephe zoluntu esi sixeko, uza kufumana imboniselo entsha ngokupheleleyo emanzini. Nangona wayevuma yayo izikhephe kunye Happy, Amsterdam kuyafikeleleka ngokulula kulo lonke elaseYurophu nge yimiqolo-high speed, ekwenzeni le Olwa esinye phezulu for best capital yaseYurophu ukuhamba uloliwe.
4. Berlin, Jemani
A baloko ukukhalipha German, isixeko Berlin sisifundo esimnandi ngokubambisana. Sasazaa yi-Berlin Wall kubini, le nhloko ephaphama kuphela ubunye yayo 1989 emva kokuwa ulawulo lwamaKomanisi empumalanga. Ukusukela ngoko, yalephuza kunye nokukhula kweedolophu kwaye ngoku likhaya abantu abangaphezu kwezigidi ezibini. Yinto egcwele craft beer imigoqo, olondolozo lwembali, kunye iintsalela graffitied le Wall.
Njengoko kumbindi nenkcubeko lizwe, Berlin Kumele-utyelelo. Enoba ukhangela ukuzonwabisa esulungekiswe ngokohlobo opera okanye befuna ukuba ukubetha ezinye izindlu hippest eYurophu, Berlin akufuneki ukuba awukho.
Nangona ndiza kusa iiyure ubuncinane ezintandathu ukufumana apha e Amsterdam, kukho oololiwe ezininzi ngosuku, oludinga ungacwangcisa ishedyuli yakho ukufika.
5. Best European Capitals ukuba ahambe ngetreyini: Prague, Umphakathi waseCzech
Hluke kwezihloko Western European, Prague ikomkhulu Czech Republic eMpuma Yurophu omnye kakhulu izixeko edume European Central. Ekhaya ukuya kwenye lamathala idumileyo ehlabathini, i Klementium, Prague libonisa inkcubeko yalo ngeenxa zonke iimbombo. Tyelela i Clock Astronomical, iwotshi yokusebenza indala ehlabathini. Thatha ujikeleze Isikwere saseKapa, apho izitalato zenziwe ngamatye agranyagranya kunye nemizila pedestrianized kuthetha ukuba bachithe iiyure ezula ngaphandle kwexhala.
Top off ixesha yakho asele enye imivalo ezininzi esi sixeko efihlakeleyo, ngaphambi kokuba aye a umculo komkhosi.
Prague inama links ngololiwe amahle kunye neminye imizi, kuquka ixesha uhambo ukusuka eBerlin of neeyure ezine ezinesiqingatha. Misa apha lokunciphisa imbali sixeko phambi kokuba uqhebeke uhambo lwakho kulo lonke elaseYurophu.
IYurophu indawo enkulu kwaye zahlukene ogama Union kuthetha ukuba kulula kunakuqala ukuhamba ngololiwe. Thatha ithuba kumazwe kwemida wanduluka ukuya kwezi iingqukuva yimbali ngexesha lakho. Tsiba Intloko-moya kunye nezihlwele zayo kunye nokutya moya overpriced kwaye usebenzise uloliwe lokuya. Enoba hop indlela yengingqi kwibhodi okanye tirhisa eyongezelelweyo elincinci kuba apha-high speed kaloliwe, uya kunandipha i uhambo ngololiwe, ukubona indawo, kunye nokunye okuninzi.
Siye waba wayifulela iincam zokuhamba. Ngoku ixesha ngayo ukuba ukubhukisha ezinye amatikiti etreyini! Gcina A Isitimela yindawo yokuthenga amatikiti etreyini.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best European Capitals ukuba ahambe ngetreyini” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-capitals-travel-train%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
ikomkhulu capitals europeantravel europetrains eurotrip London train Travel travelfrance travelgermany travelnetherlands
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy